ZADARMO verzia elektronickej knihy Oromo vydania 9
DUNKAANA: Fakkeenya Ibsa Gad Fagoo Yesuus Kiristoos ( I )
Súčasných stiahnutí : 60
Fakkeenya Ibsa Gad Fagoo Yesuus Kiristoos
Dhugaa dunkaana qulqullaa'aa keessa dhokatee jiru attamitti beekuu dandeenyaa? Wangeela bishaanii fi Hafuuraa hubachuu qofaan, dhugaa jiraataa fi gaaffilee dunkaana qulqullaa'aa keessaa ka'an hubachuu dandeenya.
Balballi dunkaana qulqullaa'aa boffee bifa waaqaa, dhiilgee fi bildiimaa fi bullukkoo fo'aa gaarii irraa walitti dha'amanii hojjetamuun isaa fayyina Yesuus Kiristoos ilmaan namaa agarsiisa. Haaluma kanaan, dubbiin dunkaana bara Kakuu Moofaa fi dubbiin Kakuu Haaraa akkuma hojii bullukkoo fo'aa gaarii sanaa walitti hidhamee jira. Garuu dhugaan kun bara dheeraadhaaf kiristaanota dhugaa barbaadan jalaa dhokatee ture.
Yesuus gara biyya lafaa dhufee Yohannisiin cuuphamee fannoo irratti du'ee dhiiga isaa dhangalaaseera. Wangeela bishaanii fi Hafuuraa utuu hin hubatin, dhugaa dunkaana bara Kakuu Moofaa keessa dhokatee jiru hubachuu hin dandeenyu. Dhugaa dunkaanicha keessaa hubannee itti amanuu qabna. Dhugaa boffee bifa waaqaa, dhiilgee fi bildiimaa fi bullukkoo fo'aa gaarii balbala dhunkaana itti walga'anii hubannee itti amanuu nu barbaachisa.
Kiristaanonni hedduun utuu hiikkaa boffee bifa waaqaa dunkaana bara Kakuu Moofaa keessaa hin hubatin wangeela cubbuuttii isaan qulleessu arganneerra ofiin jedhu. Utuu Yesuusitti amananii jiranii Kiristaanonni cubbuu qabna ofiin jedhan dhugaa boffee bifa waaqaa, dhiilgee fi bildiimaa balbala dunkaana qulqullaa'aa irratti mul'atee jiru hin hubanne jechuu dha.
Kanaafuu barreessaan kitaaba kanaa dhugaa boffee bifa waaqaa, dhiilgee fi bildiimaa fi bullukkoo fo'aa gaarii balbala dunkaana qulqullaa'aa kana keessa jiru hiikee barsiisuu fedheera. Boffee bifa waaqaa, dhiilgee fi bildiimaa irraa hojjetamuun dunkaana qulqullaa'aa dhugaa wangeela bishaanii fi hafuuraa bara Kakuu Haaraa kan agarsiisuu dha. Kitaaba kanaan hiikkaa dhugaa boffee bifa waaqaa, dhiilgee fi bildiimaa fi bullukkoo fo'aa gaarii keessa jiru ni argitu, amantii qofaanis Gooftaa quunnamuu ni dandeessu. Hiikkaa wangeela boffee bifa waaqaa, dhiilgee fi bildiimaa dunkaanni qulqullaa'aa irraa hojjetame keessa jiru hubattanii amantii cubbuuttii nama fayyisuu akka qabaattaniif isinan affeera.
Oromo vydanie 9